ठुला प्रतियोगिताहरु नजिकिदै गर्दा नेपाल क्रिकेट संघको तयारी भने शुन्य!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता November 14, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| अनियमितता, भ्रष्टाचार, खेलाडीहरूको सँगको सम्झौता र वर्गीकरण लगायतका काण्डमा मुछिने गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घले गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्टा देखाएको छ।
टीट्वेन्टी विश्वकप छनौटको ग्लोबल क्वालीफायर पुगेको नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले मुख्य प्रशिक्षक विहिन रहेको छ।
ओमनमा सम्पन्न भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ को सिरिज पछि पूर्वप्रशिक्षक डेभ वाटमोरले राजीनामा दिएका थिए। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका प्रशिक्षकः डेभले अहिले भारतमा रञ्जी टोली सम्हाली रहेका छन्।
मुख्य प्रशिक्षकको राजीनामा पश्चात झण्डै दुई महिना अगाडी मुख्य प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको नेपाल क्रिकेट संघले झण्डै ६० भन्दा बढी प्रशिक्षकको आवेदन पाएको बुझिएको छ।
दरखास्त दिएर आवेदन पनि पाइसकेको नेपाल क्रिकेट संघले मुख्य प्रशिक्षक अहिलेसम्म छान्न सकेको छैन।
ठूला प्रतियोगिताहरु मुखैमा आइसकेको भएता पनि नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि प्रशिक्षण तथा तयारी भ्रमण अहिलेसम्म तय गर्न सकेको छैन।
दुई महिना पछाडी सुरु हुने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ को खेल हरुका लागि अहिलेबाट तयारी सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरु अहिलेसम्म क्याम्पमा फर्किएका छैनन्।
विश्व क्रिकेट लिग लगत्तै अस्ट्रेलियामा हुने सन् २०२२ को टी २० विश्वकपको छनोट प्रतियोगिता रहेको छ। यसपटक बलिया राष्ट्रहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएता पनि अहिलेसम्म तयारी सरु गर्न नसक्दा यसपटक पनि फेरि नेपाल छनौट चरणबाटै फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ।
नेपालले टी ट्वेन्टी विश्वकप सुरु हुनुभन्दा अघि ओमानमा भएको डिभिजन लिग २ पछि अन्य टोलीहरू विरुद्ध कुनै खेल खेलेको छैन भने क्रिकेट संघले कुनै सिरिज तय गरेको छैन।
सन् २०१४ मा विश्वकप क्रिकेटमा सहभागिता जनाएर सनसनी मचाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली त्यसपछि भने अन्य संस्करणहरु मा सहभागी हुन सकेको छैन। व्यवस्थापन सँगै प्रतियोगिताहरुको कमी र क्रिकेट सङ्घको कमजोर व्यवस्थापनले नेपाली क्रिकेट टोली लगातार धरासायी बन्दै गइरहेको छ।
Posted in क्रिकेट, राष्ट्रिय क्रिकेटTagged #cricket association nepal #Nepal cricket team
टि २० विश्वकप फाइनलमा आज अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भिड्दै
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौ| दुबई र ओमानमा जारी टि-२० विश्वकप २०२१ को फाइनल खेलमा आज अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड प्रतिस्पर्धा गर्दैछन। प्रतियोगिताको ७औ संस्करण सम्म आइपुग्दा अहिले सम्म टि २० विश्व च्यापियन बन्ने अवसर नपाएका दुवै टोलीले आज इतिहास रच्ने मौका पाउनेछन्। सेमीफाईनलमा दुई दाबेदार तथा उत्कृस्ट टोलि पाकिस्तान र इंगल्याण्डलाई […]
अस्ट्रेलियाको अहिले सम्म कै खराब ब्याटिंग, अन्तिम खेलमा लज्जास्पद हार
राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राईडर्स भिड्दै
टि-२० शृङ्खला अन्तर्गत आज भारत र इङ्ग्ल्यान्ड भिड्दै !!
फास्ट बलरहरुले प्रयोग गर्ने रिवर्स स्विंग भनेको के हो? कसरि गरिन्छ?
सन् २०२२ को टि-२० विश्वकपका लागि नेपालले ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने
महिला विश्वकप : अस्ट्रेलियालाई सातौं उपाधि